Home » Aha! Jokes, Satire » ကလေးကလား အလွဲများ
ဟားရေး ဗေတားနော် တားမီး ခင်းဇော အတွက် အတားလွတ်ဂုဏ်ယူးပါဒယ်း
အတော်ဖတ်လိုက်ရတယ် ဒက် ရယ်။
ဟမလေးဗေတားရယ် ခင်ဇော့်အလွဲထက်ပိုရီရတယ် မျက်ရည်ကိုထွက်ကော။ ဗေတားမျက်နှာဂျီးနဲ့ခေါင်းလေးခါခါပြောဒါ ဟီးဟီး
အဟိ.. ကုလားတစ်သိုက်နဲ့ ဝိုင်းနေမယ့် နာ့မမဂျီးကို မြင်ကြည့်တာ…
အဲ့မှာ ကုလားတစ်သိုက်နဲ့ ဝိုင်းနေတယ်
ဒါရှို လူက တေးးတေးးလှလှ ချောချော နုနုလေးး လို့
အိုက်လိုဒေ လွဲမစိုးလို့ ကလေးထဲက ကလားတွေဆို အပေါင်းသင်းမလုပ်ခဲ့တာ…
အလုပ်မှာတော့ ရှောင်လို့ မရတော့ဘူးး
မချောမိုက်မိုက် ကုလားတစ်သိုက်ပုံစံလေး မြင်ယောင်မိသေး
အဲဒီ လို သီးးသန့် ခေါင်းးစဉ် ဆို
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်…လို့…ပြောရင် နောက်တယ်ထင်ဦးမယ်…။
ဒီလူဂျီးး ဆီက ဒါမျိုးး ကော်မန့် လိုချင်တယ်ပြောလည်းး
​ရောမ ​ရောက်​​တော့လည်း ​ရောမလိုကျင့်​နိုင်​ရမှာ​ပေါ့ ။ ​နေ၀န်းနီ ရဲ့ ​မွေးသမိခင်​ အား​ပေး​နေကြ စကား တစ်​ခု ရှိရဲ့ ” နင့်​က ​ချေးကျရာ ​ပျော်​တဲ့ ​ကောင်​ ” တဲ့ ။ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ​ရောက်​တဲ့ ​နေရာ ​ပျော်​​အောင်​​နေတတ်​​တော့ စိတ်​ညစ်​စရာ မရှိ​တော့ဘူး ​ပေါ့​လေ
ကလား ၁၅ ယောက်နဲ့ ဆိုလိုက်ကလိုက်နဲ့ မျက်စိထဲမြင်မြငိပီးရီလိုက်ရတာဟယ်
Yesterday. You come. I come. We open this. Full water. Right. OK?
အဲ့စကားတွေတတ်ရင် ရွှတ်ခန်း နဲ့ နီးမှာလားဟမ်??
ရန်ကုန်က.. တချိန်ကကုလားတွေတော်တော်များပြီး.. ကုလားမြို့လိုတောင်ဖြစ်ခဲ့တာ…
ရခိုင်ကိစ္စဖြစ်တော့ အလုပ်ထဲက ပါကစ္စတန် ကုသလတစ်ကောင် ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့…
ရုံးမလဲ သီရိလင်္ကာ ကုလား(၃)ယောက်ရှိသအေ့၊ ကိုယ်ကလဲ ကျား/မ/လူမျိုး/ဘာသာမခွဲ ဆက်ဆံတော့ တော်တော်ခင်ကြပါတယ်.. ဒါပေသိ သူတို့ကို အတော်သီးခံရတာက စကားအရမ်းများတာရယ် (လူကြီးတွေကတော့ ကျား ၁၀၊ မ ၅၊ ကုလား ၂ တဲ့.. စကားများတာကိုပြောတာ)၊ အမွေးအကြိုင်တွေ မွန်နေအောင်သုံးတာရယ် …
ချစ်ဝါး ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာ ပါတဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေမလားးး
ချစ်စနိုးနာမယ်ဒွေက အရှည်ရယ်၊ ဗိုက်ပူရယ်၊ မျက်ပျူးရယ်… ရုံးကလူတွေကလဲ နာမယ်တွေ ခက်တော့ မခေါ်တတ်ကျဘူးလေ
အင်းး ဘာသာတူ လူမျိုးတူဖြစ်ဖြစ် ဘာသာကွဲ လူမျိုးကွဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရပ်ကောင်းမကောင်းပဲ အခြေခံပါတယ်
အဟီး comment ရှည်သွားရင် စိုးစောရီးပါနော်…
မမဂျီးရေးတာ ဖတ်လိုက်ရင်… လူက ရီရီမောမော ပြန်ဖြစ်သွားတယ်..
ကြီးတော့…. အမေက ကုလားကားကြည့်မယ်ခေါ်ရင်… အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး..မလိုက်တော့ဘူး
အိန္ဒိယမင်းသားတွေ ထဲ ရှရွတ်ခန်းကို အရမ်းကြိုက်တယ်
ခုထိလည်း အိမ်က အမေတို့ရဲ့ တိုးတိုးဖော် တိုင်ပင်ဖော် အပျိုကြီး ညီအစ်မတတွေကလည်း အစ္စလာမ်တွေပါပဲ ကိုယ်မွေးကင်းစထဲက မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာတာ ခုထိ
ကုလားအစာတွေထဲ ဂျလေဘီမုန့်လုံး ၀ါဝါလေးတွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ အရမ်း ချိုရင်တော့ မစားနိုင်ဘူး
ဆွိ ဒီလောက် လူချစ်လူခင်များတာ သူများ လုပ်ကြံမှာတော့ မပူရပါဘူး
မသာကာ အစားမှား အစားများရင်သာ ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တာ
သူ့ ကားး happy new yearကြည့်ပြီးးးပြီလားးး
ဖတ်ပြီး မျက်စိထဲ ဓာတ်ရှင်ကြည့်ရသလို မြင်လာပြီး ရီလိုက်ရတာ တော်။
ဒဏ်တတ်တာက အုံနာ ဆီက Safety Officer တို့ မိန်းကန်ထရက်တာက Safety Coordinator တို့ က သူတို့ ပိုင်နက် ဆိုဒ်ထဲမှာ
အဲဒီ ဆေးဖတီး နဲ့ သွားသွားညိလို့ သများကောင်းမှု အကြောင်းပြုပြီး မင်းသားကြီးကို ဒဏ်ရိုက်ခံရတာ ၂ ခါ ရှိပြီ။
တစ်ခုခုစိတ်မျောသွားရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့သွားတတ်တာလည်း ကျတော့်အကျင့်တစ်ခုပဲ။
ကုလားအစားအစာဆို တေ်ာတော်များများလည်းကြိုက်ပြန်ရော တိုရှည် ၊ ချာပါတီ ၊ ဒန်ပေါက် ပြီးတော့ ဒီပဝါလီမှာလုပ်တဲ့ မုန့်အချိုတွေလည်းကြိုက်တယ်။